Amaala Antigua na Barbuda - ezinụlọ nyocha
Citizensmụ amaala site na Ngalaba Investment (CIU) na-atụ aro ka Cabinet maka nnabata nke ulo oru, ma ọ dị adị ma ọ bụ atụ aro, maka ebumnuche itinye ego na azụmaahịa n'okpuru Mmemme Ego site na Mmezu Ego.
Ozugbo enyere ikike itinye ego n'ọrụ azụmaahịa, CIU ga-atụle ngwa maka ụmụ amaala. Usoro itinye akwụkwọ a yiri nke nke NDF, ya bụ, maka itinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ gị, a ga-agwa gị ka ịkwụ ụgwọ oge ruru yana 10% nke ụgwọ nhazi gọọmentị. Ozugbo inwetara leta nkwado gi, a gha agwa gi ka itinye ego nke ego nhazi ndi gọọmentị na ego itinye onu ahia gi n’ime ubochi iri ato. N'ihi ụdịrị itinye ego dị otú ahụ, a ga-ekwenye nkwekọrịta escrow n'etiti ndị ọzọ, ma a ga-emefe mbufe ego ahụ n'ime ụbọchị iri atọ site na mwepụta akwụkwọ nkwado.
Gaa na Ọfịs, Commissionlọ Ọrụ Dị Elu ma ọ bụ Ọfịs Consular nke Antigua na Barbuda iji nakọta paspọtụ gị ma theụọ iyi ma ọ bụ nkwuputa nkwenye gị. Njikọ ụlọ ọrụ Embassies / Kọmitii dị elu / sulọ ọrụ nnọchi anya gosipụtara na ibe ọzọ.